I-China Exhibit & Trade Show mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
Ii-acrylics ziipolymers ze-methyl methacrylate (PMMA), eneempawu ezininzi eziluncedo kwimiboniso kwimiboniso yorhwebo okanye kwimiboniso yokuthenga. Zicacile, zilula, zilukhuni kwaye ziyanyangeka, zingenziwa ngokwezifiso, kulula ukuzenza kwaye kulula ukuzicoca. Amathuba ngee-acrylics aya ngaphaya kwemiboniso yorhwebo. Ii-acrylics lukhetho oludumileyo kwezinye izinto zentengiso ezinje ngee-mannequins, ukuboniswa kwefestile, iiracks ezixhonywe eludongeni okanye iishelfu, ukujikeleza imiboniso yeetheku kunye nemiqondiso.
Iphepha le-acrylic le-Dhua lenza isiseko esifanelekileyo sokwenza iindawo zokubonisa urhwebo kunye nemiboniso. Yonke into esuka kwitafile kunye nekhawuntara kwiibhena kunye neempawu zokubonisa zinokufumaneka kwiphepha lethu le-acrylic ukutsala umdla wabathengi.
● Bonisa iimeko
● Ikhadi leshishini / incwadana / umnini mqondiso
● Iifowusta zeepowusta
● Ukuhonjiswa kodonga